Ravimbomanga endasina sy akoho - Voyage à Madagascar
par Gaël RAKOTOVAO	 10 juin 2016
Ao anaty suggestion menu malagasy moa anamamy fa ity ravimbomanga endasina sy akoho fa mitovy ihany ny fanaovana azy.
Brède (ravimbomanga na anamamy),
Fikarakarana ravimbomanga endasina sy akoho
Afanaina mamay tsara ny menaka, arotsaka ny anana, atao mahery be ny afo.
Arotsaka ny ail voatoto tsara sy ny sel, tsy saromana mihitsy. Vao hita fa mifitsaka ny anana dia esrorina. Rehefa mahery ny afo tsy mitera-drano ny anana.
Ny akoho asiana sel sy poivre dia endasina mendy.
Anamamy endasina sy akoho
Atao betsaka ny anana fa mifintina be.
Afaka asiana sauce d’huitre kely koa.
anamamy endasina sy akoho, anana sy akoho, laoka tsotra, recette sakafo gasy, sauce d'huitre
Article précédent : Purée de pommes de terre et croûton
Recette de Jalebi ou Mofo TantelyArticle suivant :